Rasendrasoa - Wikipedia
Fasan-dRasendrasoa, vadiben'Andrianampoinimerina, ao amin'ny Rovan' Ambohidrabiby.
Rasendrasoa dia iray tamin'ireo vadin'Andrianampoinimerina, mpanjakan'Imerina. Lasa vadibe izy tamin'ny nahafatesan-dRabodonimerina, vadiben'ny mpanjaka talohany izay tsy niteraka.
1 Rasendrasoa vadikely lasa vadibe an'Andrianampoinimerina
2 Rasendrasoa avy ao Ambohitsoa zafin'Andriampolofantsy
3 Rasendrasoa sy Ambohidrabiby Menabe
4 Ny taranak'Andrianampoinimerina sy Rasendrasoa
Rasendrasoa vadikely lasa vadibe an'AndrianampoinimerinaHanova
Ny Mpanjaka Andrianampoinimerina, nanjaka tamin'ny taona 1787 - 1810 dia nanana vady maro ka ny 12 tamin'izy ireny dia nantsoina hoe "vadin'andriana". Napetrany tamin'ny vohitra maro taty Imerina izy ireny. Isan'ireo vadin'andriana ireo Rasendrasoa.
Tamin'ireo vadin'Andrianampoinimerina ireo dia Rabodonimerina no 'vadibe' izay namponenin'Andrianampoinimerina tao Bado. Tsy niteraka i Rabodonimerina. Rehefa niamboho i Rabodonimerina dia Rasendrasoa no lasa vadiben'Andrianampoinimerina na dia Rambolamasoandro aza no reny niterahan'Andrianampoinimerina an-dRadama I.
Rasendrasoa avy ao Ambohitsoa zafin'AndriampolofantsyHanova
Takila faha-153 ao amin'ny boky Tantara ny Andriana miresaka ny amin-dRasendrasoa
Rasendrasoa dia taranak'Andriamanitrirazaka, zanaka lahiaivon'Andriampolofantsy. Eo Ambohitsoa no tanindrazana niavian'dRasendrasoa talohan'ny nampiakaran'Andrianampoinimerina azy teo Ambohidrabiby. Nisy antony manokana no nifidianan' Andrianampoinimerina ny terak'Andriampolofantsy satria Andriampolofantsy no zanaka lahimatoan'ny Mpanjaka Ralambo tamin'ireo vadikeliny ary Andriampolofantsy no lahimatoan'ny zanadralambo amin'Andrianjaka ( saingy ny zanadralambo ao Lazaina kosa no natao zokiny amin'ny Zanadralambo amin'Andrianjaka satria nanjaka zanaka, noho zanaky Ravadifo avy ao Lazaina i Andriatsitakatrandriana nandimby an'Andrianjaka). Misy lovantsofina hafa kosa milaza fa Andrianjaka sy Andriampolofantsy ary Ravololondralambo no zanaky Ralambo tamin'i Ratsitohinamanjaka. Ary Ratsitohinamanjaka no vadin'i Ralambo miara-miafina aminy ao Ambohidrabiby. Izany hoe taranaky Ratsitohinamanjaka ihany izany i Rasendrasoa fa tsy hafa akory.
Rasendrasoa sy Ambohidrabiby MenabeHanova
Taorian-dRalambo mandrapahatongan'Andriamasinavalona dia tsy mba nisy zanak'andriana napetraky ny mpanjaka teo Ambohidrabiby,izany dia noho ny hafa-dRalambo fa Ambohidrabiby dia vohitry ny tera-dRabiby sy ny tera-dRalambo eo Ambohidrabiby. Ny mpanjaka Andriamasinavalona anefa no sahy nandika izany hafadRalambo izany ka tamin'ny nizarany efatra ny fanjakany tamin'ny zanany efa-dahy dia napetrany teo Ambohidrabiby i Andrianavalonimerina zanany. Niady antrano anefa ireo zanak'Andriamasinavalona efa-dahy ary, asa na noho ny fanotana fady ny hafa-dRalambo fa tsy naharitra akory ny fanjakan'Andrianavalonimerina fa lasan'ny Andriatsimitoviaminandriana rahalahiny ary mpanjaka teo Ambohimanga ny fanjakany teo Ambohidrabiby. Mbola nampitoerin'Andriatsimitovimainandriana teo ihany anefa i Andrianavalondambozafy saingy noho ny fahatahorany ny hafa-dRalambo raibeny sy ny fahatahorany sao mbola hikomy ny taranak'Andrianavalonimerina dia noesoriny teo Ambohidrabiby ary namponeniny tamin'ny vohitra hafa ny taranak'Andrianavalondambozafy, koa tsisy taranak'Andrianavalonimerina tafatoetra intsony teo Ambohidrabiby nanomboka tamin'izany. Ary Andrianavalonimerina sy Andrianavalondambozafy aza raha niamboho dia tsy nahazo nafenina teo Ambohidrabiby fa tany anaty rovan'Antananarivo. Tafaverina indray ny hafatry Ralambo fa Ambohidrabiby dia vohitry ny tera-dRabiby sy ny Zanadralambo teo Ambohidrabiby efa nitoetra teo Ambohidrabiby hatramin'ny nanjakan-dRalambo. Vokatr'izany dia ny Mpanjaka teo Ambohimanga no mitantana mivantana an'Ambohidrabiby hatramin'ny nanjakan'Andrianavalonimerina hatramin'ny nanjakan'Andrianjafy. Raketabao izay taranak'Andrianavalondambozafy no hany tafaverina nonina teo Ambohidrabiby tamin'ny Andrianampoinimerina saingy tsy nahazo nanao fasana tao androva ka voatery nanao fasana teo Fonohasina, noho ny hafatr' Andriatsimitoviaminandriana fa tsy azo afenina (asitrika) ao Ambohidrabiby rehefa miamboho ny mpanjaka Andrianavalonimerina sy Andrianavalondambozafy zanany ary ireo taranany. Andrianavalonimerina sy Andrianavalondambozafy moa dia nafenina any Antananarivo. Ireo taranany kosa tamin'ny nanjakan'Andrianampoinimerina dia nifindra ao Andranovelona any avaratr'Ambohidrabiby ary nianavaratra hatrany Antoby any amin'ny faritr'Anjozorobe.
Rehefa niady tamin'Andrianjafy anadahindreniny anefa Andrianampoinimerina dia nandefa iraka hampanaiky an'Ambohidrabiby izy ka tsy nanaiky Ambohidrabiby raha tsy mijanona ho menabe sy tsy alaimbodihena Ambohidrabiby araka ny hafa-dRalambo manao hoe "Ambohidrabiby dia vohitry ny tera-dRabiby sy tera-dRalambo eo Ambohidrabiby" ary koa amin'ny maha tendrombohitra 12 masina azy. Noeken'Andrianampoinimerina izany fepetra izany ary nafarany mba tsy hovain'izay mpanjaka mandimby azy koa. Ary satria Ambohidrabiby no vohitra nanaiky voalohany an'Andrianampoinimerina dia nataon'Andrianampoinimerina ho " Zoky sy hasin'Imerina" ary "ketsa mahavita tena Ambohidrabiby". Koa raha napetrak'Andrianampoinimerina teo i Rasendrasoa dia tsy nataony tompomenakely na tompombodivona, fa nijanona hatrany ho menabe Ambohidrabiby ka ny mpanjaka mivantana avy eny Ambohimanga na Antananarivo no mitantana an'Ambohidrabiby hatramin'ny taona 1895. Izany koa no antony manazava fa ny teraky Rasendrasoa dia tsy mba nanana trano na tany eo antampon'Ambohidrabiby fa ny fasany ihany no ao. Satria tokoa raha nizara tany teo amin'ny vohitr'Ambohidrabiby ny Mpanjaka Andrianampoinimerina dia nozarainy tamin'ny taranak'Ambohidrabiby ny manodidina ny rova teo Ambohidrabiby ary tsy mba nomeny zara-tany teo i Rasendrasoa. Ary nohinian'Andrianampoinimerina ho Rasendrasoa izay taranak'Andriampolofantsy lahimatoan'ny Zanadralambo amin'Andrianjaka no napetrany teo Ambohidrabiby satria heveriny fa tsy voadika ny hafa-dRalambo ary mora hoan'ny Mpanjaka Andrianampoinimerina no mifehy an'Ambohidrabiby sy ny vohitra miaraka aminy.
Tany amboalohany dia avy eny Ambohitsoa no nampiakarin'Andrianampoinimerina honina teo Ambohidrabiby i Rasendrasoa. Tato aoriana anefa, rehefa niamboho i Rabodonimerina dia nampiakarin'Andrianampoinimerina ho vadibe i Rasendrasoa ka tao Bado no namponeniny izy. Tato aoriana kosa, rehefa nanomboka nahazo fitia teo imason'Andrianampoinimerina i Rambolamasoandro dia ito farany no nonina natetika tamin'Andrianampoinimerina tao Ambohimanga fa Rasendrasoa kosa namponenin'Andrianampoinimerina tanteraka teo Ambohidrabiby.
Ny taranak'Andrianampoinimerina sy RasendrasoaHanova
Niterahan'Andrianampoinimerina roa vavy, i Rasendrasoa dia Ravaozokiny sy Ravaozandriny na Ravaobe. Misy lovantsofina milaza koa fa mbola zanak'Andrianampoinimerina sy Rasendrasoa koa i Rasoavololona. Ravaozokiny dia niteraka Rapoenty, vadiny Andriantsitohaina 16 Hrs, ary ireo zanaka amanjafiny. Ravaozandriny na Ravaobe dia niteraka Rajaokarivony. Rasoavololona dia niteraka an'i Rasoalambo sy ireo zanaka amanjafiny.
Rehefa niamboho i Rasendrasoa dia nafenina ao anaty rovan'Ambohidrabiby ka ny nanafenana azy sy ny taranany dia ny fasana eo avaratry ny fasandRabiby mivady sy Andriandambotanimanjaka. Ary mbola miloloha trano "masina" ny fasan-dRasendrasoa ao.
Marihina fa ny zafin-dRasendrasoa dia ny Zanak'Andriana Rajaokarivony sy ny zanany Printsy Rabemaso no lehiben'ny Andriamasinavalona amin'ny mandiavato talohan'ny naha lasa zanatany an'i Madagasikara.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasendrasoa&oldid=964557"
Dernière modification le 9 Janoary 2019, à 13:18
Voaova farany tamin'ny 9 Janoary 2019 amin'ny 13:18 ity pejy ity.